Apple ma aqbali doonto barnaamijyada aan lagu horumarin Xcode 11 laga bilaabo Abriil 2020 | Wararka IPhone
Apple ma aqbali doonto barnaamijyada aan lagu horumarin Xcode 11 laga bilaabo Abriil 2020
Waxyaabaha cusub ee ay Apple soo bandhigtay laba maalmood ka hor ayaa ah tallaabo kale oo lagu hagaajinayo fikradahooda. Si kastaba ha noqotee, iyagu waa aalado cusub Maxaa laga fiirsanayaa marka la qorsheynayo iyo barnaamijyada barnaamijyada. Tani waxay ka dhigan tahay in abuurayaasha barnaamijyadu ay tahay inay la qabsadaan naqshadahooda shaashadaha waaweyn sida iPad-ka 10.2-inji ah, ama ay sare u qaadaan shaqooyinka kale sida saddex kamaradood oo ah iPhone 11 Pro. Apple ayaa waqti cayiman qabtay abriil 2020 si loogu qasbo horumariyeyaashu inay soo rogaan codsiyadooda lagu abuuray Xcode 11, oo ay ku jiraan dhammaan bey'adaha horumarka ee nidaamyadooda cusub ee hawlgalka, isla markaana la jaan qaada shaashadaha iPhone XS Max iyo iPad Pro oo ah 12.9 inji.
Codsiyada waa in lagu abuuraa iOS 13 SDK
Dhis barnaamijyadaada adoo adeegsanaya Xcode 11 GM, oo ay ku jiraan SDKs loogu talagalay iOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS 12, iyo macOS Catalina. Laga bilaabo Abriil 2020, dhammaan barnaamijyada iOS ee loo gudbiyo App Store waxay u baahan doonaan in lagu dhiso macruufka 13 SDK ama ka dib. Waa inay sidoo kale taageeraan naqshada shaashadda buuxda ee 12.9-inch iPhone XS Max ama iPad Pro (jiilka 3aad), ama ka dib.
Xcode 11 taas oo gaadhay nuqdadeedii Master Master-ka oo la heli doono dhawaan si rasmi ah oo ay ku jirto jawiyada horumarineed ee IOS 13, iPadOS, watchOS 6, tvOS, iyo macOS Catalina. Nidaamyadan cusub ee hawlgalka waxay leeyihiin waxyaabo gaar ah. Waxaa intaa dheer, iPadOS waa ku dhowaad nidaam cusub oo dib loo habeeyay, sidaa darteed horumariyeyaashu waa inay tixgeliyaan astaamaha cusub ee lagu soo daray deegaankooda si ay ula qabsadaan barnaamijyadooda barnaamijyada cusub ee cusub ee iPadOS.
Taasi waa sababta Apple ay ugu cayimay waqtiga abriil 2020 si loogu baahan yahay horumariyeyaashu inay ka shaqeeyaan Xcode 11 iyo inay awood u yeeshaan inay la jaanqaadaan codsiyadooda nidaamyada kala duwan ee hawlgalka iyo, wixii ka sarreeya, inay la jaan qaadaan cabbirada alaabooyinka kala duwan ee Big Apple. Gaar ahaan shaashadda 12.9-inji ee jiilka 3aad ee iPad Pro iyo shaashadda 6.5-inji ee iPhone XS Max.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple ma aqbali doonto barnaamijyada aan lagu horumarin Xcode 11 laga bilaabo Abriil 2020
Apple waxay siineysaa ilaa 3-da Maarso, 2020 barnaamijyada carruurta inay u hoggaansamaan xeerarka cusub
Had iyo jeer la soo bandhigo, oo ah shaqo ka mid ah Apple Watch oo ay tahay inaan waqti dheer haysanno